एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको कुल बीमा शुल्क आर्जन ४६ प्रतिशतले बढ्यो – Insurance Khabar
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको कुल बीमा शुल्क आर्जन ४६ प्रतिशतले बढ्यो
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार १५:३९
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासको अवधिमा कुल बीमाशुल्क आर्जन ४६.११ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले चालु आवको दोस्रो त्रैमासको अवधिमा ३८ करोड ९८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले २६ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
कम्पनीले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार उक्त अवधिमा ४१ हजार २ सय ७६ बीमालेख जारी भएका छन् । त्यस्तै कम्पनीले १६ करोड ७५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम ३९ करोड ७३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या १३ सय ६ रहेको छ ।
१३ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको एभरेष्टको जगेडा कोष १२ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीले चालु आवको दोस्रो त्रैमासको अवधिमा २ करोड ५१ लाख ६६ हजार खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको प्रतिश शेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ । यस्तै प्रति शेयर नेटवर्थ ४ सय २ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ ।
आँखुखोला जलविद्युतको दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा आज, के-के छन् प्रस्ताव ?
भारतः सरोगेट मदरको कम्तीमा तीन महिनाको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने
नागरिक लगानी कोषको लाभांश घोषणा, बोनश र नगद कति ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अब कति पर्छ भाउ ?
मधेश प्रदेश अन्तर्गत ९ शाखाका कर्मचारीलाई लुम्बिनी जनरलले दियो अण्डर राइटिङ्ग तालिम
बीमा कम्पनीको मर्जरपछि ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको हुनैपर्ने प्रावधान
आफै मर्जरमा नजाने कम्पनीलाई फोर्स मर्जर गराउने, छिटो पार्टनर खोज्न अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन
एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने तयारीमा रहेका हिमालयन एभरेष्टको कम्तीमा २५ शाखा गाभिने